D-Xylose Absorption Test (ဒီ-ဆိုင်လို့စ် စုပ်ယူနိုင်ခြင်းကို တိုင်းတားသော စစ်ဆေးချက်) - Hello Sayarwon
D-Xylose Absorption Test (ဒီ-ဆိုင်လို့စ် စုပ်ယူနိုင်ခြင်းကို တိုင်းတားသော စစ်ဆေးချက်)
ရလဒ် အဖြေကို နားလည်ခြင်း။
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးနည်းများ » D-Xylose Absorption Test (ဒီ-ဆိုင်လို့စ် စုပ်ယူနိုင်ခြင်းကို တိုင်းတားသော စစ်ဆေးချက်)
D-Xylose Absorption Test (ဒီ-ဆိုင်လို့စ် စုပ်ယူနိုင်ခြင်းကို တိုင်းတားသော စစ်ဆေးချက်) ကဘာလဲ။
ရေးသားသူ Khine Phoo Ngon ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Kaung Thar.
D- xylose စုပ်နိုင်ခြင်းကို တိုင်းတားသော စစ်ဆေးချက် ဆိုတာဘာလဲ?
D- xylose စုပ်နိုင်ခြင်းကို တိုင်းတားတဲ့ စစ်ဆေးချက်ဟာ သကြားတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ D-xylose ပမာဏကို သွေး (သို့) ဆီးနမူနာ ထဲမှာ တိုင်းတာပေးနိ်ုင်ပါတယ်။ ဒီစစ်ဆေးချက်ဟာ အူနံရံတွေကနေ အစားအစာ ထဲမှာ ပါလာတဲ့ အာဟာရတွေစုပ်နိုင်တာကို တားမြစ်နိုင်တဲ့ ပြသနာ၊ ရောဂါတွေကို ရောဂါအမည်တပ်တဲ့နေရာမှာ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
D-xylose ကို ပုံမှန်အားဖြင့် အူနံရံတွေကနေ အလွယ်တကူ စုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စုပ်ယူခြင်းမှာ ပြသနာဖြစ်လာတဲ့အခါ D-xylose ကို အူနံရံတွေက မစုပ်တော့ဘဲ သွေးထဲမှာ (သို့) ဆီးထဲမှာ D-xylose ပမာဏနည်းနေခြင်းတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
D- xylose စုပ်ယူနိုင်ခြင်းကို တိုင်းတားသော စစ်ဆေးချက် ကိုဘာကြောင့် လုပ်ဆောင်ရသလဲ?
တကယ်လို့ သင့်အူတွေက D-xylose ကို ကောင်းကောင်းမစုပ်တော့ဘူးဆိုရင် ဆရာဝန်က သင့်မှာ Malabsorption Syndrome(မစုပ်ယူနိုင်တဲ့ ရောဂါ)ဖြစ်နေ၊ မနေ ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ သင့်ကို ဒီစစ်ဆေးချက်လုပ်ဆောင်ဖို့ ပြောပါလိမ့်မယ်။
မစုပ်ယူနိုင်တဲ့ရောဂါဟာ သင့်ရဲ့ စားလိုက်တဲ့ အစားအစာအများစုကို ခြေဖျက်ဖို့ တာဝန်ရှိတဲ့ အူတွေက သင့်နေ့စဉ် အစားအစာတွေကနေ လုံလောက်တဲ့ အာဟာရတွေကို မစုပ်ယူနိုင်တော့တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
အဲလို မစုပ်နိုင်တဲ့ ရောဂါဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း၊ ကြာရှည် ၀မ်းသွားခြင်း၊ အလွန် အားနည်းနေခြင်း၊ နဲ့ မောပန်းလွယ်ခြင်း စတဲ့ လက္ခဏာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
စစ်ဆေးချက် မလုပ်ဆောင်ခင် သိရမည့်အချက်များ။
D- xylose စုပ်ယူနိုင်ခြင်းကို တိုင်းတားသော စစ်ဆေးချက် မလုပ်ဆောင်ခင် ဘာတွေကြိုသိထားသင့်သလဲ?
သင့်အူထဲမှာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ များပြီးတဲ့ ဘက်တီးယီးယား တွေရှိနေပြီ ဆိုရင်တော့ စစ်ဆေးချက်မလုပ်ဆောင်ခင် ၁ ရက်၊ ၂ရက်လောက်မှာ ပိုးသတ်ဆေးကို သောက်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီစစ်ဆေးချက်ဟာ ရေဓါတ်ခမ်းခြောက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အတွက် ဒီစစ်ဆေးချက် အပြီးမှာ ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့ အရည်တွေကို အစားပြန်ထိုးဖို့ အရည်များများ သောက်သုံးထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ D-xylose အရည်သောက်ပြီးနောက် ၀မ်းသွားတဲ့ ပြသနာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ကို ပြောပြရပါမယ်။
အသက် ၁၂ နှစ်အောက်ရှိတဲ့ ကလေးတွေမှာ သွေးထဲမှာရှိတဲ့ D-xylose ပမာဏကိုတိုင်းတာပြီး ရတဲ့ ရလဒ်ဟာ ဆီးထဲက ပမာဏကို တိုင်းတာတာထက် ပိုပြီး ယုံကြည်ဖွယ်ရာရှိပါတယ်။
Crohn’s ရောဂါ (သို့) အခြား မစုပ်ယူနိုင်တဲ့ ရောဂါတွေကို သံသယရှိပါက အူနံရံတွေကို ကြည့်နိုင်တဲ့ စစ်ဆေးချက် တစ်ခုလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
D- xylose စုပ်ယူနိုင်ခြင်းကို တိုင်းတားသော စစ်ဆေးချက်အတွက် ဘယ်လို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမလဲ?
ဒီစစ်ဆေးချက်မလုပ်ဆောင်ခင် ၂၄ နာရီ အတွင်းမှာ pentose ပါတဲ့ အစာတွေကို မစားသင့်ပါဘူး။ Pentose ဆိုတာဟာ D-xylose နဲ့ ဆင်တူတဲ့ သကြားတစ်မျိုးပါ။ pentose အများကြီးပါဝင်တဲ့ အစာတွေက ဂျယ်လီ၊ ယို၊ နဲ့ အသီးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်ဆေးချက် အဖြေကို နှောက်ယှက်နိုင်တဲ့ indomethacin နဲ့ aspirin ကဲ့သို့သော ဆေးတွေကို ဒီစစ်ဆေးချက် မလုပ်ဆောင်ခင် မသောက်ဖို့ ဆရာဝန်က အကြံပေးပါလိမ့်မယ်။
သွေးမဖောက်ခင် ၈နာရီ မှ ၁၂ နာရီအတွင်းမှာ ရေ ကလွဲပြီး ဘာအစားအသောက်မှ မစား၊ မသောက်သင့်ပါဘူး။ ကလေးတွေကတော့ ဒီစစ်ဆေးချက် မတိုင်ခင် ၄နာရီမှာ ရေကလွဲပြီး ဘာမှ မစားသင့်၊ မသောက်သင့်ပါဘူး။
D- xylose စုပ်ယူနိုင်ခြင်းကို တိုင်းတားသော စစ်ဆေးချက်လုပ်ဆောင်နေစဉ် မှာ ဘာတွေဖြစ်နိုင်သလဲ?
D-xylose အရည် မသောက်ခင် နဲ့ သောက်ပြီး ချိန်မှာ ဆီးနဲ့ သွေးနမူနာတွေထဲမှာရှိတဲ့ D-xylose ပမာဏကို တိုင်းတာရပါတယ်။ ဒီစစ်ဆေးချက်ကို စလုပ်ဖို့ အတွက် သင့်ရဲ့ တစ်နေ့တာရဲ့ ပထမဆုံးဆီး နမူနာနဲ့ သွေးနမူနာတွေကို အရင် ရယူရပါမယ်။
အဲဒီနောက်မှာ D-xylose အရည်ကို သောက်ရပါမယ်။ လူကြီးတွေအတွက် D-xylose သောက်ပြီး ၂နာရီအကြာမှာ သွေးနမူနာ ယူလေ့ရှိပါတယ်။ ကလေးတွေ အတွက်ကတော့ သောက်ပြီး ၁နာရီ မှာ သွေးနမူနာ ယူနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် သွေးနမူနာကို d- xylose သောက်ပြီး ၅နာရီမှာ ယူနိုင်ပါတယ်။
D-xylose အရည်သောက်ပြီး ၅နာရီ အကြာအတွင်းမှာ ထွက်သမျှဆီးနမူနာတွေ အားလုံးကို ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ ဆီးနမူနာကို သောက်ပြီး ၂၄နာရီ အကြာမှာ ယူလေ့ရှိပါတယ်။
ကျန်းမာရေး ပညာရှင်များဖြင့် သွေးဖောက်ရာမှာ :
သွေးစီးတာကို ရပ်ဖို့ သင့်ရဲ့ အပေါ်လက်မောင်းမှာ အပတ်တစ်ခုပတ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲလိုလုပ်ခြင်းက အပတ်ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ သွေးပြန်ကြောတွေကို ပိုပြီးကြီးလာအောင် ထင်ရှားလာအောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှလည်း သွေးကြောထဲကို အပ်ထိုးထည့် ရတာပိုလွယ်ကူစေမှာပါ။
အပ်ထိုးမယ့်နေရာကို အရက်ပြန်နဲ့ သန့်စင်အောင်လုပ်ပါမယ်။
ပြီးရင် အပ်ကို သွေးကြောထဲ ထိုးပါမယ်။ အပ်တစ်ချောင်းထပ်ပိုပြီး လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။
သွေးဖြည့်ဖို့ အတွက် ပြွန်တစ်ခုကို အပ်နဲ့ တွယ်ဆက်ထားပါမယ်။
သွေးလုံလုံလောက်လောက်ယူပြီးပြီဆိုရင်တော့ လက်မောင်းနားမှာ ပတ်ထားတဲ့ အပတ်ကို ဖယ်လိုက်ပါမယ်။
အပ်ကို ထုတ်တဲ့အချိန်မှာ ဂွမ်းစ တစ်ချို့ကို အပ်ထိုးထားတဲ့နေရာမှာ အုပ်ထားပါမယ်။
အပ်ထိုးထားတဲ့နေရာမှာ နည်းနည်းဖိထားလိုက်ပြီး အပေါ်က ပလာစတာ ကပ်ထားရပါမယ်။
နံနက်အချိန်မှာ ဆီးကို စပြီးနမူနာယူရပါမယ်။ အိပ်ယာထပြီးတာနဲ့ ဆီးအိတ်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ဆီးတွေကို ကုန်အောင်ထုတ်ရပါမယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလို ကုန်အောင်ထုတ်လိုက်တဲ့ ဆီးတွေကို နမူနာ အဖြစ် သိမ်းထားလို့ မရပါဘူး။ ၅ နာရီ ဆီးစုဆောင်း တဲ့ စမှတ်ကို သိနိုင်အောင် သင်စပြီး ဆီးသွား ပြီး ယူတဲ့ အချိန်ကို မှတ်ထားရပါမယ်။
စမှတ်ပြီး နောက်ထပ် ၅နာရီ လုံးမှာ သွားသမျှဆီးတွေကို စုထားရပါမယ်။ဆရာဝန်(သို့) ဓါတ်ခွဲခန်းက သင့်ကို ၄ လီတာ လောက်ဆန့်တဲ့ ထည့်နိုင်တဲ့ container(ထည့်ခွက်) တစ်ခုကို ပေးပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီထည့်ခွက်ကြီ်းမှာ ပါတဲ့ သေးငယ်၊ သန့်ရှင်းတဲ့ ထည့်ခွက်ထဲကို အရင် ဆီးသွားထည့်ပြီး ဆီးတွေကို ထည့်ခွက် အကြီးထဲကို လောင်းထည့်ရပါမယ်။ သင့်လက်တွေနဲ့ ထည့်ခွက်ရဲ့ အတွင်းဘက်တွေကို မထိရပါဘူး။
စုဆောင်းနေတဲ့ ကာလအတွင်းမှာ ထည့်ခွက်ကြီးကို ရောခဲ သေတ္တာထဲ တည့်ထားရပါမယ်။
၅နာရီ ပြည့်ချိန်(သို့) မပြည့်ခင်လေးမှာ နောက်ဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့ ဆီးအိတ်ထဲကဆီးတွေကို ကုန်စင်အောင် ထုတ်ရပါမယ်။အဲဒီဆီးတွေကို ထည့်ခွက်ကြီးထဲ ထည့်ပြီး အချိန်ကိုလည်း မှတ်သားထားရပါမယ်။
ဆီးနမူနာထဲမှာ သန့်စင်ခန်းသုံးစက္ကူ၊ အမွေး၊ မစင်တွေ၊ ရာသီလာတဲ့ သွေးတွေ၊ (သို့) အခြား ပြင်ပ ပစ္စည်းတွေ မပါရပါဘူး။
ဒီစစ်ဆေးချက် မပြီးခင်အထိ ဘာမှ မစားရပါဘူး။
D- xylose စုပ်ယူနိုင်ခြင်းကို တိုင်းတားသော စစ်ဆေးချက်လုပ်ဆောင်ပြီးရင် ဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲ?
ဆရာဝန်က သင့်မှာ မစုပ်နိုင်တဲ့ ရောဂါရှိနေတယ်လို့ သံသယရှိနေရင် သင့် အူတွေရဲ့ နံရံကို စစ်ဆေးဖို့ စစ်ဆေးချက် တစ်ခု လုပ်ဆောင်ဖို့ အကြံပေးနိူင်ပါတယ်။
သင့်အူမှာ ကပ်ပါးကောင် ရှိနေရင်တော့ ဆရာဝန်က ဒီကပ်ပါးကောင်က ဘာလဲ၊ ဘယ်လိုကုသလို့ရနိုင်မလဲ ဆိုတာတွေကို သိနိုင်ဖို့ အခြား စစ်ဆေးချက်တွေ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ဆရာဝန်က သင့်မှာ short bowel syndrome ( အူ အလျား တို သွားခြင်း )ရှိနေတယ်လို့ ယုံကြည်ပါက သင့်ရဲ့အစားအသောက်ပုံစံ ပြောင်းလဲ ဖို့ (သို့) ဆေးညွှန်ကြားပြီး ကုသဖို့ အကြံပေးနိုင်ပါတယ်။
D- xylose စုပ်ယူနိုင်ခြင်းကို တိုင်းတားသော စစ်ဆေးချက်အတွက် မေးလိုတဲ့ အချက်တွေ ရှိနေသေးပါက ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ဆုံ၊ ဆွေးနွေးပြီး ညွှန်ကြားချက်တွေ ရယူနိုင်ပါတယ်။
စစ်ဆေးချက် ရလဒ် အဖြေက ဘာကိုဆိုလိုသလဲ?
D- xylose အရည်သောက်ပြီး ၂နာရီ အကြာမှာ သွေးထဲမှာ ရှိတဲ့ D- xylose ပမာဏဟာ အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ D- xylose အားလုံးနီးပါးကို ၅နာရီအတွင်း ဆီးထဲကနေ အပြင်ကို စွန့်ထုတ်နိုင်လေ့ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ အူနံရံတွေသာ D- xylose ကို ကောင်းကောင်းမစုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင် သွေး၊ ဆီးတွေထဲမှာ ရှိတဲ့ D-xylose ပမာဏ ဟာ အလွန်နည်းနေပါလိမ့်မယ်။
အခြေအနေတော်တော် များများက D-xylose ပမာဏကို ပြောင်းလဲ စေနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ရောဂါ လက္ခဏာ၊ ယခင် ကျန်းမာရေး အခြေအနေ နဲ့စပ်လျဉ်းပြီး ပုံမမှန်တဲ့ ထူးခြားတဲ့ အဖြေရလဒ်တွေကို ဆရာဝန်က ဆွေးနွေးပြောပြနိုင်ပါတယ်။
အောက်မှာ ဖော်ပြမယ့် ပုံမှန်တန်ဖိုးတွေက
ဒီတန်ဖိုးတွေက နမူနာ ပြထားတဲ့ အတိုင်းအတာ တစ်ခုသာ ဖြစ်ပြီး ဓါတု စစ်ဆေးခန်း တစ်ခုနှင့် တစ်ခုကြားမှာ ကွာခြားချက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ သင် စစ်ဆေးထားတဲ့ ဓါတုစစ်ဆေးခန်းက ပုံမှန် ရလဒ်အဖြေထဲမှာ သင့်စစ်ဆေးချက် အဖြေကရှိနေသင့်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သင့်ဆရာဝန်ကလည်း သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေနဲ့ အခြား အချက်အလက်တွေပေါ် မူတည်ပြီး သင့်စစ်ဆေးချက် အဖြေကို တွက်ချက်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ဆိုလိုတာက ဒီမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ပုံမှန် ရလဒ်တန်ဖိုးနဲ့ အနည်းငယ်ကွာဟနေပေမယ့်လည်း သင့်အတွက် နဲ့ သင်စစ်ဆေးထားတဲ့ ဓါတုစစ်ဆေးခန်း အတွက်တော့ ပုံမှန်ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
မွေးကင်းစ( ၅ ဂရမ် ပမာဏ)၁၅ မီလီဂရမ်/ဒက်ဆီလီတာ (mg/dl)(သို့) ၁ မီလီ မိုး / လီတာ( mmol/L)ထက်များသည်။ကလေးများ( ၅ ဂရမ် ပမာဏ)၂၀ မီလီဂရမ်/ဒက်ဆီလီတာ (mg/dl)(သို့) ၁.၃ မီလီ မိုး / လီတာ( mmol/ L)ထက်များသည်။လူကြီးများ( ၅ ဂရမ် ပမာဏ)၂၀ မီလီဂရမ်/ဒက်ဆီလီတာ (mg/dl) (၂နာရီအတွင်းမှာ)(သို့) ၁.၃ မီလီ မိုး / လီတာ( mmol/ L) ထက်များသည်။
လူကြီးများ ( ၂၅ ဂရမ် ပမာဏ)
၂၅ မီလီဂရမ်/ဒက်ဆီလီတာ (mg/dl)၂ နာရီအတွင်းမှာ (သို့) ၁.၆ မီလီ မိုး / လီတာ( mmol/ L) ထက်များသည်။
ဆီးထဲမှာ ရှိတဲ့ D-xylose ( ၅ နာရီ ဆီးနမူနာ)
ကလေးများနမူနာတွင် D-xylose ၁၆ % မှ ၃၃% ပမာဏ တွေ့ရသည်။လူကြီးများနမူနာတွင် D-xylose ၁၆ % ထက်များသော ပမာဏ (သို့) ၄ ဂရမ်ထက်များသော ပမာဏ တွေ့ရသည်။လူကြီးများ ( အသက် ၆၅ နှင့် အထက်)နမူနာတွင် D-xylose ၁၄ % ထက်များသော ပမာဏ (သို့) ၃.၅ ဂရမ်ထက်များသော ပမာဏ တွေ့ရသည်။
ပုံမှန်အောက် နည်းသော တန်ဖိုးများ။
ပုံမှန်အောက် နည်းသော တန်ဖိုးတွေက အောက်ပါ အကြောင်းအရင်းတွေ ရှိခြင်း ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Celiac disease ; Crohn’s disease; Whipple’s disease ကဲ့သို့သော အူရဲ့အာဟာရတွေ စုပ်နိုင်တဲ့ စွမ်းအင်တွေကို အနှောက်ယှက်ပေးနေတဲ့ ရောဂါ ( မစုပ်နိုင်သော ရောဂါ) ရှိနေခြင်း။
Short bowel syndrome ( အူ အလျားတိုသွားသော ရောဂါ)
Giardiasis နှင့် hookworm (သံလုံးကောင်) ကဲ့သို့သော ကပ်ပါးကောင် ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း။
အန်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း။ ( အစာ အဆိမ့်သင့်ခြင်း (သို့) တုပ်ကွေး စသည်) တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဓါတု စစ်ဆေးခန်းတွေ နဲ့ ဆေးရုံတွေအပေါ်မူတည်ပြီး D- xylose စုပ်ယူနိုင်ခြင်းကို တိုင်းတားသော စစ်ဆေးချက် အဖြေအတွက် ပုံမှန်ပမာဏ အနည်းငယ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ စစ်ဆေးချက် အဖြေအတွက် မေးစရာရှိပါကဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
D-Xylose absorption test. http://www.webmd.com/ibs/d-xylose-absorption-test?print=true . Accessed Jul72016
D-Xylose absorption test. http://www.healthline.com/health/d-xylose-absorption#Procedure4. Accessed Jul72016
D-Xylose absorption. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003606.htm. Accessed Jul72016
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ အောကျတိုဘာ 8, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း အောကျတိုဘာ 8, 2017